DEG DEG: Mareykanka Oo BAAR-SANGUUNI Ka Bilaabay Duqeyn Hawada ah Iyo Saraakiisha Federaalka Oo 2 Siyaabood U kala Hadlay | Afrikada
DEG DEG: Mareykanka Oo BAAR-SANGUUNI Ka Bilaabay Duqeyn Hawada ah Iyo Saraakiisha Federaalka Oo 2 Siyaabood U kala Hadlay
Afrikada, Muqdisho: Waxaa isa soo taraya wararka weli ka soo baxaya dagaalkii Baar Sanguuni, Aadax Isxaaq Cali oo ah wasiir ku xigeenka warfaafinta ayaa wakaaladda wararka SONNA u sheegay in 87 dhimasho ay u geysteen Al-Shabaab, halka sarkaal ka tirsan ciidanka oo ku sugan xeradii weerarku ka dhacay uu isaguna si kale wax u sheegay.
Al-Shabaab ayaa iyagu hal mar hadashay mana jiro wax kala ‘kala hadal’ ah oo dhankeeda ka soo yeeray.
Qeylo Dhaanka dowladda ayaa u muuqata mid naxdin iyo wel-wel ay ku beertay ‘Sheegashooyinka dagaalka’ waxaana dowladdu ay hore u hilmaantay in ay ciidankeeda u dejiso istraatiijiyad ay isku difaacaan, intii ay gadaal dambe hadalka isku dar dari laheyd.
Dhanka kale, Sida aad muuqaalka hoose ku arki doonto, telefishinka federaalka ayaa fidiyay muuqaallo muujinaya ciidammada Mareykanka oo diyaaradahooda gelinkii dambe ee maanta ay duqeymo ka geysanayeen degaannada ku teedsan Baar-Sanguuni, Helikobterrada Black Hawk ayaa degaannada ay duqeeyeen ku sheegay in ay weli ku dhuumaaleysanayaan kooxihii weerarka geystay.
Lama oga weli in Duqeymaha galabta dhacay iyo khasaaraha ka dhashay.